Buddhavani | Mahavani | बौद्ध शिक्षामा चार ब्रम्हविहार | |बुध्दबाणी
बौद्ध शिक्षामा चार ब्रम्हविहार
Published on 2019-09-19 / बुध्दबाणी
भगवान् बुद्धको धर्म संस्कृति कस्तो थियो त भनी विचार गर्दा यसमा चार कुराहरू स्पष्ट रुपमा देखिन आएका छन् । भगवान् बुद्धले जसरी सबै प्राणीप्रति दया र करुणा देखाएर आफुले प्राप्त गरेको परमशान्ति सुख निर्वाणलाई गाउँ गाउँमा बाँड्दै हिंड्नुभयो । त्यसैगरी सबैले सबै प्राणीप्रति
१) मैत्री, २) करुणा, ३) मुदिता र ४) उपेक्षाको भावना राखेर बस्नु पर्दछ भन्दै यसैमा सुख र शान्ति छ भन्ने कुराको सन्देश पनि सबैलाई दिनु भएको छ । यसैलाई बौद्ध शिक्षामा चार ब्रम्हविहार पनि भनिन्छ । चार ब्रम्हविहारको यसरी व्याख्या गरिएको छ ः–
मैत्री ब्रह्मविहार ः
मैत्री भन्नाले सबै प्राणीप्रति मित्रताको भावना राख्नु हो, अर्थात् कसैलाई पनि आफ्नो पराई सम्झेर काखापाखा नगर्नु अथवा कसैलाई पनि पराई नसम्झनु हो । सबैलाई आफ्नै परिवार सरह सम्झनु सबैसँग समान तरिकाले व्यवहार गर्नु र सबैको समान तरिकाले नै रक्षा गर्नु हो । भगवान बुद्ध भन्नु हुन्छ ः– “हामीहरू यो संसारमा सुखपूवर्क निश्चय पनि बाँच्न सक्छौं, वैरभाव राख्ने मानिसमा पनि अवैरको भावना गरेर” । फेरी तथागत भन्नुहुन्छ ः यसको लागि सहनशीलताको खाँचो छ । यसरी मानिसले सबैप्रति मैत्रीभाव राखेर विहार गर्दा कसैप्रति पनि शत्रुताको भाव रहँदैन र सबैसित एकै साथ मिलेर बसी सुखपूर्वक बाँच्न सकिन्छ ।
करुणा ब्रह्मविहार ः
अरुको दुःखमा दुखित हुनु, दुःखमा साथ दिनु, सहयोग गर्नु, दुःख हटाउन मद्दत गर्नु, करुणाको भावना हो । मानिसमा करुणाको भावना आउनासाथ ऊ आनन्दित हुन्छ । उसको चित्तमा शान्ति आउँछ । यो अनुभव गर्ने कुरा पनि हो, जब–जब हामीहरू अरुको दुःख निवारण गर्न सक्षम हुन्छौ, हामीलाई तुरुन्त सुखको अनुभव हुन्छ । यसरी मनमा करुणाको भावना जगाउनाले र शरीर, मन र वचनलाई परहिततिर अग्रसर गरी भोकालाई खाना, गरीबलाई धन, रोगीलाई औषधी, नाङ्गालाई कपडा, अशिक्षितलाई ज्ञान दिन सक्यौं भने हामीहरूलाई आप्mसे आफ आनन्दको अनुभूति हुन्छ । जसको कारणले गर्दा आप्mनो र अरुको पनि कल्याण हुन जान्छ । यसरी आफ्नो र पर हितमा ध्यान दिई मन, बचन र कर्मलाई सबै प्राणीप्रति दया करुणाले युक्त भएको कार्यमा लगाई राख्नु नै करुणा ब्रह्मविहारको अभ्यास हो ।
मुदिता ब्रह्मविहार ः
अरुको सफलतामा अरुको उन्नतीमा आफूलाई पनि खुसी र प्रसन्न बनाउन सक्नु मुदिताको भावना हो । मनमा इष्र्या पाल्नाले आफैलाई जलाउँछ र पिडा दिन्छ । जस्ले अरुको उन्नतीमा आफुलाई प्रसन्न राख्न जानेको छ, अरुको दुःखमा दुखित हुनु, दुःखमा साथ दिनु, सहयोग गर्नु, दुःख हटाउन मद्दत गर्नु, करुणाको भावना हो । मानिसमा करुणाको भावना आउँना साथ ऊ आनन्दित हुन्छ । उसको चित्तमा शान्ति आउँछ । यो अनुभव गर्ने कुरा पनि हो, जब–जब हामीहरु अरुको दुःख निवारण गर्न सक्षम हुन्छौ, हामीलाई तुरुन्त सुखको अनुभव हुन्छ । जस्लाई आप्mनो कर्म र कर्मफलमा विश्वास छ, जस्को अज्ञानता हटिसकेको छ र सम्यक दृष्टि छ ऊ सधैं आनन्दित हुन्छ । साथै उसलाई अरुको सुखमा पनि आफ्नै सुखमा जस्तै नै आनन्द आउँछ । यसै गरि कर्ममा विश्वास गर्ने मानिसले आफूमा भएको दुःखलाई पनि सहन गर्ने क्षमता राखेको हुन्छ । यही नै मुदिता ब्रह्मविहारको अभ्यास हो ।
उपेक्षा ब्रह्मविहार ः
उपेक्षा भावना जीवनलाई सुखमय बनाउने अर्को उपाय हो । चाहे दुःख होस् या सुख, लाभ होस् या हानी, यस होस् या अपयस, निन्दा होस् या प्रसंसा यि आठ लोक धर्ममा चित्तलाई विचलित नगर्नु उपेक्षा भावना हो । बुद्घपुरुषहरूको भनाई छ “आफुले राम्रो काम गर्दै जानुपर्छ र प्राप्त भएर आएका राम्रा र नराम्रा फलहरू जस्तो भए पनि स्वीकार्नु पर्छ” । मानिसलाई सधैंभरी सुख पनि हुँदैन सधै भरी दुःख पनि हुँदैन । यि सबै कुराहरू आउने जाने गर्दछ ।” जन्म भए पछि मृत्यु हुन्छ यसलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ । पढे पछि फेल पनि हुन्छ पास पनि हुन्छ यसलाई पनि स्वीकार्नु पर्छ । राम्रो पछि नराम्रो पनि यसैमा छ, यसलाई पनि स्वीकार्नै पर्छ । दिन–रात, घाम– पानी, जन्म–मृत्यु यहि नै प्रकृतिको नियम हो । प्रकृतिको स्वभाव नै विपरित धर्ममा आधारित छ । कसैले पनि प्रकृतिको नियम विपरित, स्वभाव विपरित र धर्म विपरित जाने प्रयास गर्दा दुःख हुन्छ । यस्तो प्रकृतिको यथास्थितिको अवस्था बुझ्न र जान्न सक्नु र त्यही अनुसार हिड्नुमा नै सुख छ । बुद्धकाे संस्कृति भनेको पनि यथार्थवादि संस्कृति हो । यसमा पाप कर्म नगर्ने र धर्मका कामहरू मात्र गर्ने भनेर मात्र पनि पुग्दैन । मुख्य कुरा चित्तशुघ्दी गर्ने कुरामा बढी ध्यान दिनु पर्दछ । अधिकांश मानिसहरूले चित्त शुद्घि कसरी हुन्छ र यसलाई धर्ममा किन यति साह्रै महत्व दिने गरिएको छ भन्ने कुरा बुझेका पनि छैनन् । यसको बारेमा बुझ्न त्यति सजिलो छैन ।
मानिसहरू आत्म शुघ्दी चित्त शुघ्दी र पाप पखाल्ने नाममा तिर्थ, व्रत, नदी स्नान, यज्ञ होमादि कार्यहरू गरिराखेका हुन्छन् । धेरै जसो परम्परागत धर्ममा विश्वास गर्ने मानिसहरू नदी स्नान गर्दा र दान यज्ञ आदि कर्मले मात्र पाप पखालिएर जान्छ भन्ने ठानेका हुन्छन् । तर यसरी पाप पखालिने कुरामा कुनै आधार छैन । यो विश्वास गर्न सकिने र भरपर्दो कुरा पनि होइन । पाप भनेको राग, द्वेष, मोह र अहंकार र घृणाको कारणले उत्पन्न हुने कुरा हो । यी राग, द्वेष, लोभ, ईष्र्या, मोह अथवा मुढताको अवस्था, मान–सम्मानको चाहना र अहंकारहरू जति सबै मनबाट उत्पति हुन्छ अथवा चित्तमा उत्पति हुन्छन् । त्यसपछि मानिसले वचनले, शरीरले, मनले पापकर्महरू गर्न थाल्दछ अर्थात् उसका कायीक वाचीक र मानसिक कार्यहरू दुषित बन्न गई उसको पापकर्मको राशी बढ्न थाल्दछ । त्यसैले पाप कर्मबाट बच्न र पुण्यलाई बढाउन सबभन्दा पहिले मनलाई राग, द्वेष, मोहबाट बचाउनु पर्दछ । यसको लागि त्यागको भावना जगाई सबैप्रति मैत्री करुणा र प्रेमको भावना बढाउनु पर्छ र साथै अन्धविश्वास र अज्ञानतालाई हटाएर सम्यक दृष्टिकोणको विकास गरी पुण्यको संञ्चय गर्ने काममा पनि लागिरहनु पर्दछ ।
जब कोही व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ उसको चेतनाको अवस्था कस्तो हुन्छ ?
प्रश्न ः जब एउटा राम्रो मान्छे मन खिन्न भएर मृत्यु भयो भने उसको चेतना को अवस्था कस्तो हुन्छ ? के जन्म को दौरान केहि फरक हुन्छ वा उ अचानक अर्को […]